Kedu ihe ụgbọelu na-eme na iphone? Nke a bụ Eziokwu! - Iphone
ebee ka ntọala ụgbọelu dị na iphone
iphone 6 siri anaghị arụ ọrụ
Enweghị m ike ịnweta ipad m ka ịgbanwuo
iphone ihuenyo nwa na -adịghị anabata
Onyeisi ụgbọ elu gị gwara gị ka ịgbanwuo Ọnọdụ ụgbọelu! N'ịbụ uche dị na gị, ị chọrọ ịmụtakwu banyere njirimara a. N’isiokwu a, aga m aza ajụjụ a, “Gịnị bụ ụgbọelu na ọnọdụ na iPhone?” ma gosi gị otu esi gbanye atụmatụ a na ma ọ bụ gbanyụọ ya na ngwa Ntọala na Ogwe njikwa .
Gịnị Bụ Isgbọelu Ọnọdụ On iPhone?
Ọ bụrụ na ị na-ama na tupu, ị maara na ụgbọelu Mode. Imirikiti ụgbọ elu na-amachibido iji ngwaọrụ nke na-ewepụta akara ngosi redio.
Mgbe agbanyere Ọnọdụ ụgbọelu, iPhone gị, iPad, ma ọ bụ iPod gị nwere ike ịnye akara ngosi redio. Ya mere, kama ikwe ka ị jiri ngwaọrụ iOS gị na ụgbọelu, ị nwere ike ị gbanye Ọnọdụ ụgbọelu!
kedu ka ị ga -esi mara ma nwoke gemini hụrụ gị n'anya
Mgbe ị gbanye plagbọelu mode, gị iPhone disconnects si cellular netwọk na Wi-Fi na netwọk. Bluetooth agbanyụrịrị n'otu oge ahụ.
Etu aga esi agbanye ọnọdụ ụgbọ elu na nghazi ntọala
Iji gbanye ọnọdụ ụgbọ elu, mepee ngwa Ntọala wee pịa ihe mgba ọkụ na-esote Ọnọdụ ụgbọelu . ’Ll ga-ama Ọnọdụ ụgbọelu dị n’elu mgbe mgba ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ. Obere akara ngosi ụgbọ elu ga-egosikwa na aka ekpe aka ekpe nke ngosipụta iPhone gị.
ọrụ na miami na -enweghị akwụkwọ 2019
Etu aga esi agbanye ọnọdụ ụgbọ elu na ebe nchekwa
Nke mbụ, mepee Control Center site na ịpị elu n'okpuru ala ngosi nke iPhone gị. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone X, mepee Oghere Njikwa site na ịpụ site n'akụkụ aka nri nke ngosi ahụ.
Mgbe ahụ, kpatụ akara ngosi ụgbọelu iji gbanye Ọnọdụ ụgbọelu . Ga-amara Ọnọdụ ụgbọ elu dị na mgbe akara ngosi ụgbọ elu na-acha ọcha n'ime ma ọ bụ gburugburu oroma.
otu esi agbanwe email na itunes
Ọnọdụ ụgbọelu: kọwara ya!
Mara ugbu a ihe niile enwere ịma gbasara ụgbọ elu na iPhone gị! Gbalia k`inyere onye imara onye na-efe efe sharekekọrịta edemede a na soshal midia. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịjụ, hapụ azịza n'okpuru.